usharaxiin Madaxweyne oo Isbaheysi sameestay iyo Xog ku aadan qorshaha ay ku heshiiyeen - iftineducation.com
usharaxiin Madaxweyne oo Isbaheysi sameestay iyo Xog ku aadan qorshaha ay ku heshiiyeen
iftineducation.com – Warar hoose aan helnay ayaa tilmaamaya in Musharaxiinta Madaxweyne qaar badan oo kamid ah ay sameesteen isbaheysi ay doonayaan in ay kula dagaalamaan Musharax Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud.
Musharaxiintan ayaa aaminsan hadii ay Isbaheysi sameestaan ayna si dhab ah isu taageeraan in ay ka guuleesan karaan Xasan Sheekh oo hada heesta inta badan taageerada Xildhibaanada labada Aqal ee Baarlamaanka.
Sida aan Wararka ku helnay Musharaxiinta isbaheystay ayaa ku heshiiyay in ay codka ugu sbubaan wareega ugu dambeeya Musharaxa ugu codka badan kaa oo tartan adag la geli doona Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud.
Waxa ay sidoo kale Musharaxiinta qaar ee midoobay ku heshiiyeen hadii ay ka guuleestaan Madaxweyne Xasan in ay qeyb ka noqdaan Dowlada cusub uu soo dhisi doono Madaxweynaha cusub ee guuleesta.
Doorashada Madxaweynaha Soomaaliya ee beri ka dhaceysa magaalada Muqsisho ayaa ah mid adag oo loolan xoogan oo ka dhici doono, waxaana suurto gal ah hadii ay midoobaan inta badan Musharaxiinta Madxaweyne in uu dalka isbadal ka dhici karo.